Jowhar.com : Somali Leader News - News: Daawo Sawirada booqashada uu Ra'iisul Wasaare Cabdiweli ku yimid magaalada Jowhar
April 24 2014 06:47:36
Daawo Sawirada booqashada uu Ra'iisul Wasaare Cabdiweli ku yimid magaalada Jowhar
Wafdi uu hogaaminayo ra�iisal wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa markii ugu horeysay gaaray magaalada Jowhar isagoo ku tegey dayuurad helicopter ah.
Ra�iisal wasaaraha oo ka soo kicitimay magaalada Buuloburde oo ay soo booqdeen ayaa waxa ay ka soo degeen garoonka dayuuradaha 1:00 duhunimo magaalada Jowhar. Wafdiga ra�iisalwasaaraha oo ku tegey dayuurad helicopter ah magaalada Jowhar ayaa waxaa ku soo dhoweeyay guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cabdi Jiinow Calasow.
Ra�iisal wasaaare Cabdiweli ayaa kula kulmay hoolka shirarka gobolka Sh/dhexe qeybaha kala duwan ee bulshada waxana uu ra�iisal wasaaruhu ka hadlay ujeedada booqashadiisa iyo qorshaha ay dowlada federalka ee gobolka Sh/dhexe. Wafdiga ra�iisal wasaaraha oo ay ka mid ahaayeen wasiirka amniga qaranka,wasiirka beeraha,wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo saraakiil kale ayaa waxa ay booqasho ku tageen wabiga Shabelle gaar ahaan deegaanka Moyko. Weli waxa socda booqashada ra�iisal wasaaraha wixii ku soo kordha kala socod www.jowhar.com Somali news leader
mahad on April 10 2014
0 Comments · 7505 Reads
Jowhar.com740,247 unique visits